तिहारमा सन्देश लेखेर उपहार दिने कि 'ओखर घडी' :: सुनिता सिटौला :: Setopati
तिहारमा सन्देश लेखेर उपहार दिने कि 'ओखर घडी'
काठमाडौं, कात्तिक १९
ओखर ब्रान्डका सामान
तिहारमा दाजुभाइलाई के उपहार दिने? लुगाफाटा सधैंजसो दिएकै हो।
दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई के दिने? नगद वा कपडा दिइराखेकै हो।
तपाईंहरू पनि यस्तै अलमलमा हुनुहुन्छ भने एउटा नौलो र उपयोगी उपहार हुन सक्छ, ओखर घडी।
यस्तो के घडी भन्नुहोला, यो सामान्य बजारमा पाइनेजस्तो होइन, ओखरको काठले बनेको घडी हो। तिहारमा भाइमसलासँगै ओखरको घडी उपहार दिन सकिने विकल्प नेपाली कम्पनी ’काश’ ले ल्याएको हो।
केटा र केटी दुवैले लगाउन मिल्ने यो घडी कम्पनीले 'ओखर स्टोर’ मार्फत् बिक्री गरिरहेको छ।
यो घडी किन्न तपाईं कहीँ जान पनि पर्दैन, घरमै आउँछ। ग्राहकले ओखर स्टोर डटकममा गएर अर्डर गर्न सकिने कम्पनीका अध्यक्ष प्रकाश दाहालले जानकारी दिए। घडी घरसम्म ल्याइदिए बापत ग्राहकलाई थप शुल्क लाग्दैन।
प्रकाशका अनुसार यो घडीको 'डायल’ वरिपरिको 'केस’ र चेनमा ओखरको काठ राखेर डिजाइन गरिएको छ। घडीको इन्जिन भने जापानी कम्पनीको छ।
कम्पनीले ओखर घडी बेच्न सुरू गरेको एक वर्ष भयो। सुरूमा एक आकारमा मात्रै पाइने यो घडी अहिले दुई आकार रङमा पाइन्छ।
‘केहीले सानो डायल खोजे त्यही भएर हामीले दुइटा आकार ल्याएका हौं,’ प्रकाशले भने।
ग्राहकले अहिले 'डार्क' र 'लाइट' गरी दुई रङका डायल किन्न पाउँछन्। त्यस्तै डायल पनि ४२ मिमी र ३४ मिमीका छन्।
पहिलो ब्याचको घडीलाई अहिले धेरै परिमार्जन गरेर ल्याएको प्रकाश बताउँछन्। उनका अनुसार पहिलेको ब्यान्ड र डायलमा प्रयोग गरिएको काठ निकै पातलो थियो। जसले टुटफुटको समस्या भयो। अहिले काठ मोटो राखिएको छ।
ओखरका घडी तपाईं प्रियजनलाई उपहार दिँदै हुनुहुन्छ भने कम्पनीले घडीमै आफूलाई मनलागेका सन्देश लेखिदिन्छ।
उनका अनुसार उनको परिवारमा बाहिरबाट केही उपहार आएको थियो जसमा नाम लेखिएको थियो। त्यो आइडिया आफूलाई मन परेर घडीमा पनि लेख्न मिल्ने बनाएका हुन्।
‘हेर्दा यो सानो कुरा हो। तर यसले कति महत्व राख्दो रहेछ म अहिले बुझ्दै छु,’ उनले भने, ‘यो सुविधाले ग्राहक निकै खुसी भएका छन्।’
अन्य समयमा आफूलाई मनलागेको सन्देश लेखाएको कम्पनीले प्रतिघडी दुई सय रूपैयाँ लिने गरेको छ। अहिले तिहारका समयमा भने निःशुल्क गरिएको प्रकाशले बताए।
कम्पनीले नर्सका लागि पनि विशेष ओखर घडी ल्याएको छ। नर्सले कामको समयमा हातमा केही पनि लगाउँन पाउँदैनन्। यो घडी कोटको बाहिरपट्टी झुन्ड्याउन मिल्ने गरी डिजाइन गरिएको प्रकाशले जानकारी दिए।
घडीको नाम– नर्स वाच हो। यसको मूल्य दुई हजार चार सय ५० रूपैयाँ छ।
ओखर ब्रान्ड अन्तर्गत भित्रिएका घडीको नाम ‘काष्ठमण्डप’ हो। तिहारपछि ‘कालापत्थर’ मोडलको घडी बजारमा ल्याउने उनले बताए।
कम्पनीले घडीको मूल्य ५ हजार ९ सय ९९ रूपैयाँ तोकेको छ। चेनका हरेक टुक्रा सबै हातबाट बनाइएकाले तुलनात्मक रूपमा अलि महँगो परेको प्रकाश बताउँछन्।
‘यसको प्रत्येक डिजाइन हातैले बनाइएको हो। यसको लागत नै महँगो छ,’ उनले भने।
अब तपाईं लाग्ला यो घडी कहाँ बनेको हो?
प्रकाशका अनुसार घडीको डायल, चेन छुट्टाछुट्टै चीनबाट आउँछ। त्यसलाई यहाँ ल्याएर जोड्ने काम कम्पनीले गर्छ। घडीको 'एसेम्बल’ का लागि कम्पनीले दुई जना कर्मचारी राखेको छ। घडी डिजाइन भने कम्पनीका अध्यक्ष प्रकाशले नै गरेका हुन्।
पाँच जनाको समूह रहेको कम्पनीले पहिल्यैबाट विदेशबाट सामान ल्याएर बेचविखन गर्दै आइरहेको थियो। यही सिलसिलामा प्रकाशलाई नेपाली नाममै केही नयाँ सामान बजारमा भित्र्याउने रहर भयो।
‘साथीहरूबीच काठ प्रयोग गरेर सामान बनाउने छलफल भयो। त्यसमा हामीले घडी सोच्यौं,’ उनी सुनाउँछन्, ‘घडी बजारमा काठ प्रयोग नौलो हुने हामीले ठानेका थियौं। तर खास नयाँ कुरा रहेनछ।’
अरू भन्दा फरक हुन काश कम्पनीले थप खोजी गर्‍यो।
‘एकदिन एउटा चिनियाँ साथीले वालनटको घडी भनेर देखायो। ओखर शब्दले मलाई छोयो,’ उनी ब्रान्डको नामबारे सुनाउँछन्, ‘ओखर ब्रान्ड राखेर तिहारमा उपहार दिन मिल्ने उद्देश्यले उक्त घडी बनाउन सुरू गरेका हौं।’
ओखरको तिहारमा जुन महत्व छ, त्यो महत्वलाई यो घडीले झनै आत्मियता बढाइ दिने प्रकाशको विश्वास छ।
‘तिहारमा ओखर। ओखरकै काठले बनेको घडी। त्यहीँमाथि दाजुभाइ-दिदीबहिनीले दिएको भन्दा छुट्टै आत्मीयता महशुस हुन्छ होला,’ उनले भने।
कम्पनीले घडीमा एक वर्ष वारेन्टी दिएको छ। काठबाट बनेका घडी स्टिल जस्तो बलियो भने नहुने भएकाले अलि जतन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘हात धुँदा, बाटोमा हिँडिरहेका बेला पानी पर्दा घडीमा पानी पस्दैन। तर धेरै समय पानीमा डुबाउने, बल लगाएर खोल्ने गर्‍यो भने काठ भाँचिन सक्छ,’ उनले भने।
घडीमा केही समस्या आयो भने ग्राहकले कस्टमर केयर सेन्टरमा (९८५११३२५२४) कल गर्न सक्ने छन्।
‘वारेन्टी अवधिमा ब्याट्री सकियो वा इन्जिनमा केही समस्या भए हामी मर्मत वा सट्टा गरिदिन्छौं। चेन टुटफुट भयो भने वारेन्टीभित्र पर्दैन,’ उनले भने, ‘ग्राहकले त्यस्तै चेन हामीसँग किनेर हाल्न सक्छन्। होइन, म बाहिर चेन किनेर हाल्छु भने पनि लेदरको हाल्दा राम्रो देखिन्छ। हामीले पनि त्यो परीक्षण गरिसकेका छौं।’
प्रकाशका अनुसार कम्पनीको एउटा घडी बेचे बराबर एउटा ओखर रूख पनि रोप्ने योजना छ।
‘यो घडी लगाउने व्यक्तिले घडी लाएको मात्र हुँदैन, एउटा ओखरको रूख पनि रोपेको हुन्छ’, उनले भने।
रूख कहाँ रोप्ने भन्ने विषयमा कम्पनीले अहिले निर्णय गरिसकेको छैन। तीनवटा संस्था मिलेर रूख रोप्ने योजना बनाएकाले केही ढिला हुने उनले बताए।
‘हामीले सुरूदेखि नै रोप्ने भनेका छौं। रोप्छौं नै,’ उनले भने, ‘ग्राहकलाई हाम्रो प्रतिबद्धता नै छ।’
घडी बाँसको बाकसमा आउँछ। घडीको चेन घटाउने पिन र एउटा घडी बेचे बापत एउटा रूख रोप्छौं भनेर लेखिएको एउटा कार्ड पनि घडीसँगै ग्राहकले पाउँछन्।
आफूहरूको घडीमा कसैलाई ओखर काठ हो–होइन भन्ने शंका लागे काठ विशेषज्ञलाई देखाउन सकिने उनको भनाइ छ। कम्पनीले घडीसँगै ओखरकै काठबाट बनेको घडी ब्यान्ड पनि ल्याएको छ।
‘सबैले यही प्रकारका घडी लगाउन नरूचाउने भएकाले हामीले छुट्टै ब्यान्ड पनि ल्याएका छौं। ग्राहकले आफूसँग भएको एप्पल वा अन्य आफूसँग भएका वाचमा यो ब्यान्ड प्रयोग गर्न सक्छन्,’ उनले भने।
उनका अनुसार अन्य ब्यान्डको मूल्य एक हजार ९ सय ५० रूपैयाँ छ। एप्पलको भने मूल्य दुई हजार चार सय ५० रूपैयाँ छ। यो २० र १६ मिमी आकारमा उपलब्ध छ।
ग्राहकले घडीसँगै ओखरको काठबाट बनेको कफलिंक, चस्मा, कार्ड होल्डर, मोबाइल कभर पनि किन्न पाउँछन्।
कफलिंकको मूल्य १४ सय ५० रूपैयाँ छ। त्यस्तै चस्मा तीन हजार चार सय ५०, कार्ड होल्डर एक हजार ९ सय ५० र मोबाइल कभरको एक हजार ५ सय ५० रूपैयाँ तोकिएको छ।
एक वर्षको अवधिमा ओखर घडी एक हजार वटा बिक्री भएको प्रकाशले बताए।
‘ग्राहकको प्रतिक्रिया एकदमै राम्रो छ। अहिलेसम्म एक हजार ग्राहकले बाँधिसक्नुभयो,’ उनले भने।
आगामी दिनमा ओखर काठबाट बनेका अन्य सामान पनि ल्याउने कम्पनीको योजना रहेको उनले बताए।
(ओखर स्टोरको वेबसाइटका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बरः ९८६०११३८२६)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक १९, २०७८, १६:२४:००
'अगेनो' बेच्दै २३ वर्षीय अभियान, वर्षमै ७० लाखको कारोबार